Ankehitriny , Mampitandrina Ireo Mpamaky Mikasika Ireo Tambajotranà Fahitalavitra Rosiana Ireo Gazety An-tsoratra Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2016 14:39 GMT
Rehefa mieritreritra ny media tsy miankin'i Rosia ireo olona, matetika, mazàna no tsy mitodika amin'i Yakutsk, ho ilay renivohitry ny Repoblika Sakha, mitoetra 450 kilometatra (about 300 miles) any atsimon'ny Tendrontany Arktika, ny eritreritr'izy ireo. Fa kosa ilay gazety an-tsoratra any Yakutsk sy ireo tsikerana ataony amin'ny media mpanohana an'i Kremlin, izay nanao ny sary iray izay faran'izay nalaza indrindra tamin'ny Aterineto tamin'ity faran'ny herinandro ity tao amin'ny Aterineto Rosiana.
Ny 27 May, nizara tao amin'ny Facebook ny sarin'ny lisitr'ireo fahitalavitra tao amin'ny gazetiny ao an-toerana, “Yakutsk Vechernii” (Yakutsk Hariva),ny mpampianatra toekarena iray antsoina hoe Tuyara Gavrilyev. Ao amin'ilay sary, eo ambonin'ny fandaharan'ilay fahitalavitra “NTV,” nampian'ilay gazety an-tsoratra fampitandremana ho an'ireo mpamaky. Milaza izao io:
Mitandrema! Misy loharanombaovao mivilana sy diso matetika ny vaovaon'ny fahitalavitra. Matetika mitranga indrindra izany ao amin'ireo tambajotra NTV sy Rossiya .
Nahazo fizaràna manodidina ny 1.500 ilay lahatsoratra nalefa tamin'ny Facebook, ary naverina nalefa sy naverina nobitsihina an'arivony tao amin'ny Twitter ilay sary.
Nanoratra fampitandremana mikasika ny fomba fandaingan'ny tambajotra nasionaly matetika ny gazety an-tsoratra Yakutsk iray.
Nilaza tamin'ny vohikalam-baovao TJournal i Gavrilyeva hoe tsy hainy tsara hoe hatramin'ny oviana ny Yakutsk Vechernii no nampitandrina ireo mpamaky mikasika ny loza ateraky ny fijerena ireo fantsom-baovao, fa sahiny ny miloka fa nanomboka niseho taoriana kelin'ny 4 Martsa 2016 ilay fampitandremana, raha nandefa tatitra fanadihadiana nanàla baràka, antsoina hoe “Mibaby Trosa any amin'ny Departemantam-panjakanan'i Etazonia” ny NTV.
Nikendry ireo media malaza maro eo an-toerana, ao amin'ireo antsoina hoe ” faritr'i ” Rosia, ao amin'ireo tanàna lavitry ny “ivon'ny” firenena any Moscow sy St. Petersburg, ilay fandaharana nampisy resabe an'ny NTV. Ilay fandaharana dia nikendry manokana ireo nahazo fampindramam-bola avy tamin'ny Tahiy Ho Fampindramam-bola ho an'ny Fampiroboroboana ny Media (fantatra ankehitriny amin'ny hoe Fampiasambola ho Fampiroboroboana ny Media), izay nahazo famatsiambola avy tamin'ilay mpiahy ny maha-olona George Soros, izay nohosorana ho mpandika lalàna any Rosia ny Fondations Société Ouvert sy ny Fondation Assistance OSI izay azy.* (Ny Novambra 2015, nambaran'ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Rosiana ho tsy ‘tongasoa’ ireo fikambanana ireo.”) Niampanga ny Yakutsk Vechernii, ary ireo media maro hafa ao an-toerana , ny fanadihadian'ny NTV, hoe nanova ny politikan'ny famoahana noho ny baiko avy amin'ny Fampindramam-bola ho Fampandrosoana ny Media (izay ampitovian'ny NTV amin'ny Departemantam-panjakana Amerikana, ao anaty filazàna fisiana firaisana tsikombakomba tsy voazava tsara).
Vao navoaka ilay fandaharana, tonga dia niantso ny Filankevitry ny Mpanao Gazetin'i Rosia, filankevitra tsy miankina izay ahafahan'ireo mpanao gazety mametraka fitarainana sy mamaha “ireo fifandirana amin'ny vaovao”, ireo solotenan'ireo media efatra ao an-toerana, tafiditra amin'izany ny talen'ny trano fanontàna izay mitantana ny Yakutsk Vechernii. Ny 12 May, namoaka ny tsoakeviny mikasika ny tatitry ny NTV ny Filankeviry ny Mpanao Gazety, milaza ilay fandaharana ho “tsy mitombina” ary “manàla baràka.” Namoaka tafatafa lava niarahana tamin'ilay mpampianatra media sy serasera ihany koa ny Filankevitry ny Mpanao Gazety, nilaza fa lasa lavitra hatramin'ny “fanovàna” ny karazana tatitra fanadihadiana mihitsy ny NTV.
Taorian'ny nivoahan'ilay fandaharana voalohany tao amin'ny NTV, Leonid Nikitinsky, mpikambana ao amin'ny Filankevitry ny Filoham-pirenena ho an'ny Fiarahamonim-pirenena sy ny Zon'olombelona, nanoratra lahatsoratra fanehoankevitra tao amin'ny gazety an-tsoratra, Novaya Gazeta, nilaza fa nampiasa fomba tsy manjary mba hanangonana vaovao ireo mpitatibaovaon'ny NTV, ary natonta sy navoakany tsy araka ny toejavatra nisy. Nametraka olana amin'ny fotokevitr'ilay fandaharan'ny NTV ihany koa i Nikitinsky, izay milaza fa loza ho an'ny fahaleovantenan'ny media ny fahazoana fampindramambola avy any amin'ireo mpampiasa vola avy any ivelany. Araka an'i Nikitinsky, tena nampidi-doza ny fanaovana gazety Rosiana aza ny fihenan'ny fampindramambola ary ny fitomboan'ny famatsiambola mivantana avy amin'ireo fikambanana tantanan'ny governemanta:
Eo amin'ny fampiharana, mahatonga media tsara ireo fampindramambola (tsy zava-dehibe ny hoe tamin'iza), fa raha toa ka endrika fizaran-tsakafo maimaimpoana Rosiana fotsiny, singan-javatra mampalahelo fotsiny ny vokany … (hitanao angamba ilay hevitra). Ary rehefa fotoanan'ny kirizy, rehefa mila tampoka miresaka zavatra tsy mikasika ireo fepetra malaza miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena ny fanjakana, hita mazava fa lasa potiky ny fampielezankevitra sy ireo taratasiny ny tontolon'ny media.
Ny voalohandohan'ity volana May ity, nanondro ny Yakutsk Vechernii ho iray amin'ireo gazety an-tsoratra voalohany indrindra ao amin'ny firenena ny Trano Foiben'ireo Mpanao gazetin'i Rosia . Araka ny vohikalan'ilay gazety an-tsoratra, nanely gazety niisa eo amin'ny 43.000 eo izy ary niditra teo amin'ny asa fanaovana gazety hatramin'ny taona 1994. Tsy nahazo famatsiambola avy any amin'ny fanjakana na kaominina ny fanontàna, ary milaza ho “mahaleotena tanteraka, namelon-tena irery, ary tsy miankina amin'ny fanjakana”.
* Naoty ho an'ireo mpamaky: vatsian'ny Open Society Institute ara-bola ny RuNet Echo.